Cunaqabateyn loogu Hanjabay Madaxda Dowladda Federaalka | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Cunaqabateyn loogu Hanjabay Madaxda Dowladda Federaalka
Cunaqabateyn loogu Hanjabay Madaxda Dowladda Federaalka
Golaha Midowga Murashaxiinta ayaa si adag u diiday muddo kororsiga ay sheegeen in uu sharci darro yahay uu uu ku kacay guddoonka Golaha Shacabka uu muddo xileedkiisu dhammaaday., waxaana ay ugu baaqeen beesha caalamka in ay tillaab ka qaaddo shakhsiyaadka halista ku ah deganaanshaha iyo xasilloonada Soomaaliya.
Qoraal kasoo baxay Midowga Musharixiinta ayaa waxaa lagu sheegay in dastuurkii dalka iyo go’aankii labada aqal ee Baarlamaanka ay jebiyeen koox yar oo uu hormuud u yahay madaxweynaha iy guddoonka Golaha Shacabka ee muddo xileedkoodu dhacay.
Hoos Ka Akhriso Qoraalka Midowga Musharixiinta ay kaga hadleen Go’ankii Golaha Shacabka iyo xaalada Siyaasadeed ee xilligaan Soomaaliya.
Golaha Midowga Murashaxiinta wuxuu si adag u diidayaa muddo kororsiga sha darrida ah ee maanta uu ku kacay guddoonka Golaha Shacabka uu muddo xileedkiisu dhammaaday Sida ku cad Qod. 60aad ee Dastuurka dalka muddada xil-haynta Baarlamaanka waa afar sano oo ka billaabanaysa maalinta la dhaariyo. Labada Gole ee Baarlamaanka ayaa inta uusan idlaanin muddo xileedkooda si wadajira u ansixiyey heshiiskil doorasho ee l7 September ay wada gaareen madaxda dawlad Goboleedyada iyo kuwa dawladda Federaalka ah ee uu xilkoodu dhammaaday iminka.
Goluhu wuxuu caddaynayaa in dastuurkii dalka iyo go’aankii labada aqal ee Baarlamaanka ay jebiyeen koox yar oo uu hormuud u yahay madaxweynaha iyo guddoonka Golaha Shacabka ee muddo xileedkoodu dhacay.
Goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed in ay meel uga soo wada jeestaan difaaca dalka iyo ka hortagga kalitalisnimada dalka lagu burburinayo.
Wuxuu Goluhu bogaadinayaa tallaabta uu qaaday Taliyaha Ciidanka Booliska Gobolka Banaadir Jeneraal Saadaq Cumar Xasan oo iska diiday amarrada gurracan ee danta dalka iyo dadka lagu burburinayo. Goluhu wuxuu ugu baaqayaa saraakiisha kale ee ciidanka in ay waddadaas qaadaan, si ay sumcaddooda iyo tan dalka u badbaadiyaa